UYENZA NJANI IPOLL KWI-SNAPCHAT? IINDLELA EZI-3 ZOKWENZA IIPOLLS - ITHAMBILE
Uyenza njani iPoll kwi-Snapchat?
Kuya kufuneka uqaphele inqaku lokuvota kwezinye zeendawo zonxibelelwano. I-poll yindlela efanelekileyo yokusebenzisana nabalandeli bakho kumajelo asekuhlaleni. Eli nqaku lokuvota lidume kakuhle kwi-Instagram, apho unokwenza ngokulula ipoll kumabali akho e-Instagram. I-poll yinto apho unokubuza umbuzo kubalandeli bakho ngokubanika ithuba lokukhetha ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, i-Instagram inendawo yokwakha i-poll, kodwa xa kuziwa kwi-Snapchat, awunayo inqaku elakhelweyo. Ukuba uyazibuza ukuba ungayenza njani i-poll kwi-Snapchat, silapha kunye nesikhokelo esincinci onokuthi usilandele ukwenza ii-polls kwi-Snapchat.
Izizathu zokwenza i-poll kwi-Snapchat
Iindlela ezi-3 zokwenza i-poll kwi-Snapchat
Indlela yoku-1: Sebenzisa iwebhusayithi yePollsgo
Indlela yesi-2: Sebenzisa i-LMK: Inkqubo engaziwayo yokuvota
Indlela yesi-3: Sebenzisa i-Opinionstage.com
Ukwenza iipoll kubalandeli bakho yindlela elungileyo yokwenza abaphulaphuli abanonxibelelwano nakweliphi na iqonga leendaba ezentlalo. Kuba yonke enye indawo yemithombo yeendaba inenqaku lokuvota, kuya kufuneka ujonge ekudaleni i-poll kwi-Snapchat. Ukuba unenani elininzi labalandeli kwi-Snapchat yakho, unokwenza iipoll zokufumana izimvo zabalandeli bakho kuwo nawuphi na umbuzo okanye ingcebiso. Ngaphaya koko, ukuba uqhuba ishishini elikhulu, ke kuya kufuneka uyazi ukuba unganxibelelana njani nabalandeli bakho ukuze wazi malunga nokhetho lwenkonzo oyithengisayo kwishishini lakho. Ngoncedo lwee-polls, abantu banokuphendula ngokulula imibuzo kwaye baveze izimvo zabo ngesihloko njengokuchaza uluvo nge-poll kukhawuleza kakhulu kwaye kulula. Ke ngoko, ukwenza i-poll yabalandeli bakho kunokukunceda wenze abaphulaphuli abanonxibelelwano kwaye kukuncede unxibelelane nabalandeli abatsha.
Kukho iindlela ezininzi zokudala i-poll kwi-Snapchat. Kuba i-Snapchat ayizukuza nenqaku le-poll elakhelweyo, kufuneka sixhomekeke kwizicelo zomntu wesithathu. Nazi ezinye zeendlela onokuzama ngazo ukudala i-poll kwi-Snapchat.
Indlela yoku-1: Sebenzisa IPollsgo iwebhusayithi
Enye yeendlela ezikhawulezayo nezona zilunge kakhulu zokwenza iipolls zeSpapchat isebenzisa iwebhusayithi yePollsgo eyilelwe ukudala iipolls zeSpapchat uqobo. Ungawalandela la manyathelo ale ndlela:
1. Inyathelo lokuqala kukuvula ifayile ye IPollsgo iwebhusayithi kwikhompyuter yakho okanye kwi-smartphone.
windows yasimahla isixhobo sokusetha kwakhona iphasiwedi
2. Ngoku, unokukhetha ifayile ye ulwimi yemibuzo yakho yonyulo. Kwimeko yethu, sikhethile IsiNgesi .
3. Unako ngokulula nika ipoll yakho igama Ngokuchwetheza igama lakho elifunwayo lokuvota. Emva kokuba unike igama lokuvota, cofa apha Qalisa .
4. Uza kubona izinto ezintathu onokukhetha kuzo ngokongeza imibuzo yobuqu , imibuzo yamaqela , okanye ukwenza eyakho imibuzo . Imibuzo yobuqu neyeqela yenziwe kwangaphambili yile webhusayithi , kwaye unokukhetha ngokulula oyithandayo phakathi kwabo. IPollsgo yiwebhusayithi enkulu njengoko inika imibuzo esekwe kwangaphambili kubasebenzisi abangafuni ukwenza eyabo.
5. Ungakhetha imibuzo emininzi oyifunayo ngokunqakraza kwi khetho ' Yongeza imibuzo kwi-poll yakho . 'Ngapha koko, unokwenza i-c Ubumbano lobuqu, lweqela, kunye nemibuzo eyakho yokwenza ipoll yolonwabo ngakumbi kubasebenzisi.
6. Emva kokuba uyongezile yonke imibuzo, kuya kufuneka ukhethe i ukhetho lokukhetha ukuba abalandeli bakho bakhethe. IPollsgo ibhetyebhetye xa kuziwa ekudaleni ukhetho lwakho. Ungahlela ngokulula okanye ucime naluphi na ukhetho lwesiza. Nangona kunjalo, ngekhe ukwazi ukongeza ngaphezulu kweendlela ezi-6 zombuzo ngamnye . Ngokobuchwephesha, kufanelekile ukuba kubekho iindlela ezimbini ubuncinci kuwo wonke umbuzo. Ngapha koko, unokuhlela ifayile ye umbala ongasemva weepolls zakho .
Ukubeka esweni kuyaqhubeka nokucima emva koko kubuye
7. Okokugqibela, unganqakraza ku ' Ugqibile ukongeza imibuzo, 'Oku kuya kukusa kwiwindow entsha, apho iwebhusayithi izakwenza khona ikhonkco lokuvota onokuthi wabelane ngalo kwi-Snapchat.
8. Unokhetho lokukhetha ikopa i-URL , okanye unako ngqo yabelana ngekhonkco kwi-Snapchat okanye kwamanye amaqonga amajelo onxibelelwano afana ne-Facebook, i-Twitter, i-Instagram, i-WhatsApp, okanye nangaphezulu.
9. Emva kokuba ukope i Ikhonkco le-URL yokhetho , ungavula Snapchat kwaye thabatha i-snap engenanto . Qinisekisa ukuba uxelele abasebenzisi bakho be-snap Swayiphela phezulu ukuphendula umbuzo wakho wonyulo.
10. Emva kokuthatha i-snap, kufuneka ucofe kwi I icon yepaperclip isuka e Iphaneli elungileyo.
10. Ngoku, cola i-URL kwibhokisi yokubhaliweyo ye ' Chwetheza i-URL . ’
11. Ekugqibeleni, ungathumela ipoll yakho kwi Ibali leSnapchat , apho abalandeli bakho be-Snapchat okanye abahlobo banokuphendula umbuzo wakho wonyulo. Ngapha koko, ukuba ufuna ukukhangela iziphumo zovoto, unokujonga ngokulula ipoll yakho kwiwebhusayithi yePollsgo uqobo.
Funda kwakhona: Uyikhubaza njani iAkhawunti ye-Snapchat okwethutyana
Enye into enokuthi yenzeke kule webhusayithi ikhankanywe apha ngasentla yile I-LMK: usetyenziso lwe-poll olungaziwayo onokuyifaka ngokulula kwi-smartphone yakho. Nangona kunjalo, umahluko omncinci phakathi kwe-LMK kunye newebhusayithi yangaphambilini yokudala i-poll kukuba awukwazi ukujonga amagama abasebenzisi abaphendula umbuzo wakho we-poll njenge-LMK yinkqubo yovavanyo lwe-poll engaziwayo apho abalandeli bakho be-Snapchat okanye abahlobo banokuvota ngokungaziwa. Ke ngoko, ukuba ujonga usetyenziso olufanelekileyo lokuvota onokuthi ulusebenzise kwi-smartphone yakho, ke i-LMK: Iipoll ezingaziwayo lolona khetho lufanelekileyo kuwe. Iyafumaneka zombini iOS kunye nezixhobo ze-android. Unokulandela la manyathelo wokusebenzisa esi sicelo.
1. Inyathelo lokuqala kuku faka i I-LMK: Iipolisi ezingaziwayo usetyenziso kwi-smartphone yakho. Ngale nto, unokufaka ngokulula usetyenziso kwi Ivenkile yeGoogle Play okanye Ivenkile yeApple .
ayinakuprinta emva kohlaziyo lweWindows
2. Emva kokufaka isicelo kwi-smartphone yakho, kufuneka qhagamshela iakhawunti yakho ye-Snapchat ngokungena nge Isazisi se-Snapchat . Ukuba sele ungene kwiakhawunti yakho ye-Snapchat kwifowuni yakho, kuya kufuneka ucofe qhubeka Ukungena.
3. Ngoku, unganqakraza ku ' Isitika esitsha ’Emazantsi kwesikrini ukufikelela kuzo zonke iifayile ze Imibuzo yonyulo esele yenziwe , apho unokukhetha kuzo zonke iintlobo zemibuzo.
4. Unako kwakhona ukwenza ipoll yakho ngokongeza umbuzo wobuqu. Kule nto, kuya kufuneka ucofe ukhetho kwi ' Yenza ’Kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini.
5. Uya kufumana iinketho ezintathu zokwenza i-poll eyi I-poll eqhelekileyo, i-poll, okanye i-poll yemiyalezo engaziwayo . Unga Khetha enye yezi zintathu ukhetho.
6. Emva kokwenza i-poll yakho, kuya kufuneka ucofe i iqhosha lokwabelana Kwisikrini. Kuba iqhosha lesabelo sele linxibelelene ne-Snapchat, liyakukusa kwi-akhawunti yakho ye-Snapchat, apho ungathatha khona snap yangasemva emnyama okanye yongeza ifoto .
7. Okokugqibela, thumela i-poll Kwibali lakho le-Snapchat.
I-LMK: Iipoll ezingaziwayo azikuniki ukufikelela ekuboneni amagama abasebenzisi abaphendule i-poll yakho. Ukuba ujonga usetyenziso lokuvota apho unokujonga khona amagama abasebenzisi abaphendula ipoll yakho, emva koko esi sicelo asizukuba sakho.
Indlela yesi-3: Sebenzisa i-O nguybuyinki
Inkqubo ye- inqanaba lezimvo lolunye ukhetho kubasebenzisi abajonge ukudala imibuzo yokuzibandakanya kunye nemibuzo yokunxibelelana. Isigaba seMbono yiwebhusayithi evumela abasebenzisi ukuba benze iipolls ezinokuthi zenziwe ngokwezifiso. Abasebenzisi banokongeza imithombo yeendaba, isicatshulwa, batshintshe imibala yangasemva, kunye nokunye. Nangona kunjalo, ngokusebenzisa iinkonzo, abasebenzisi kufuneka benze iakhawunti kwi-opionionstage.com. Inkqubo yokudala i-poll ifana kakhulu neendlela zangaphambili. Kuya kufuneka wenze i-poll kwaye ukope i-URL ye-poll kwi-Snapchat yakho.
Ungayifaka njani indawo kwindawo kwi-Snapchat
Ubaleka njani iiAkhawunti ezimbini zeSnapchat kwifowuni enye ye-Android?
Fumana umntu kwi-Snapchat ngaphandle kwegama lomsebenzisi okanye inombolo
Siyathemba ukuba eli nqaku beliluncedo kwaye ukwazile yenza i-poll kwi-Snapchat . Ukuba ulithandile inqaku, masazise kwizimvo ezingezantsi. Kwakhona, ukuba uyazi naziphi na ezinye iindlela zokwenza i-poll kwi-Snapchat, ke zive ukhululekile ukuyilahla kwicandelo lamagqabaza.
Hlela i-Alt + Tab ayisebenzi kwiWindows 10
Ngaba ujongene ne-Alt + Tab ayisebenzi ngaphakathi Windows 10 ukukhutshwa? Ewe, ungakhathazeki zama ukwenza okanye ukukhubaza iiHotkeys, faka umqhubi wekhibhodi, Yenza i-Peek optio
Lungisa i-KMODE ngaphandle ayiphathwanga ngempazamo
Lungisa i-KMODE ngaphandle kwephutha elingasetyenziswanga: Le mpazamo yiBlue Screen of Death (BSOD) ethetha ukuba iWindows ayizukusebenza ngesiqhelo kwaye ngekhe ube
Lungisa i-BAD POOL HEADER kwi Windows 10
Ungawuvula njani isibane sedivayisi usebenzisa uMncedisi kaGoogle
Ungacima njani uMncedisi kaGoogle kwizixhobo ze-Android
Misa windows 10 ukunyanzeliswa okuphuculweyo ukubonisa inqaku lohlaziyo 1709
Ukulungisa Awunakho ukufaka iKhowudi yeMpazamo yeapp ku-Google Play Ivenkile
Lungisa uMqhubi WUDFRd akaphumelelanga ukulayisha
Awulungelanga Windows 10 Inguqulelo 20H2? Nantsi indlela yokuCothisa uhlaziyo lwenqaku
Uyifaka njani okanye uyikhupha njani i-OneDrive kwi Windows 10
Lungisa iAkhawunti yakho ayitshintshwanga kule Akhawunti yeMicrosoft 0x80070426
I-hotmail efanayo nembonakalo
cima iiwindows ezilindileyo zohlaziyo ezili-10
ikhompyuter iqala kwakhona ngaphandle kwesilumkiso
iiwindows 10 azikwazi ukuskrola ngephedi yokuchukumisa
windows ilayibrari yemidiya yonakele